Kwakanaka bindu kupfugama
Foam Knee Pads Inopinda
Bindu Knee Mapads
Chiitiko chekurima gadheni chinosanganisira kurima nekuchera uye kusanganisa muvhu, kazhinji zvine chekuita nekubviswa kwemasora kana pesky slugs. Kazhinji zvakanaka kuva padyo nechiito sezvazvinogona, zvinoreva kuti pane dzakawanda nguva iwe unofanirwa kuzodiwa kuitisa gadheni rako mabasa pane ese mana. Masheya akasviba emabvi haatore moyo zvakanyanya kurudzi urwu rwechirango, kunyanya kana pasi pauri kushanda risina kufanana, rakanyorova kana dombo, uye hapana chinokuvadza zvakanyanya sekupfugama pabwe rakapinza (nzira yeforogo inokanganisa kumira) .
Kune yakagadzikana, yakaderera-padanho rekudyara (tisingataure nezve kuchengetedza tirauzi rako kubva kune matombo enzvimbo) ibvi raunoda, uye isu tange tichiedza zvakanakisa, kusanganisira zvese zvinomira mabvi mapfumo nemabvi-pamabvi. Kuti tifadze mabvi edu isu Taikurudzira kupfugama vaipa zvakanaka chengetedzo, yaive yakasimba uye yakakwenenzverwa zvakanakira zuva rakaoma kubata pakati pevhu.
Iyi pfumo-rakagadzirwa ibvi rakachipa semaputi. Kubata padivi rakatetepa, kune chisina kupindirana, chakasarudzika magadzirirwo (anotaridzika kunge chidimbu chewonky chechingwa chakasvibirira), asi ichiita basa rakaringana rekusanganisa zviwanikwa zvako paunenge wakapfugama padombo repasi - hongu, haigoni kukwikwidzana iyo nyaradzo yemhando yezvisarudzo pane ino runyorwa. Yakapukuta-yakachena uye ine chimbo chekubata kana uchidarika gadheni. Izwi rinoti pabhuku rinoti "harifanirwe kushandiswa sechinhu chinotenderera", saka yambira katsi yako pakushandisa pfumo iri sedziva remvura.
Uku kukoshesa kwakanaka, kupfugama kwakabatana nehupamhi hwakakomberedza huremo unobvumira nzvimbo yakawanda yenzvimbo dzemabvi. Mushure memvura isingafungirwe, mapfumo edu anonamira akaoma nekukurumidza, akagadzirira kuita kwekunze. Yakagadzirwa kubva kuEVA foam, yakafukidzwa mumvura isina mvura neoprene, ine mwenje zvakare, kuitira kuti iwe ugone kukurumidza kuiyambuka nepakati pebindu kune vako vekudyara gadheni kuti ushandise kana iko kusimuka. Mafashoni-anoziva gadheni achafadzwa kuziva kuti aya mabvi anouya nemavara manomwe, kubva pasira grey kusvika kune inopisa pink.
Nguva yekutumira: Chivabvu-11-2020
Kero:High Technology indasitiri nzvimbo, Shijiazhuang Hebei, China
Tera:+86 311 8432 2728
Nharembozha:+86 13785209807, +86 15373877277